अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले आँसु पुछ्दै हृदय चाहिन्छ भने पछि
काठमाडौं, २८ पुस । हलमा खचाखच हजारौं समर्थकको तालीका बीच जब ओबामाले पत्नी मिसेल, छोरीहरू र सिंगो अमेरिकालाई सम्झे, एकाएक भावुक बने । उनका आँखा रसाए ।
उपस्थित सबैको मन अमिलो बनाए । कोटको खल्तीबाट रुमाल झिकेर आँसु पुछे अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा। अनि ह्वाइट हाउसमा दुई कार्यकाल बिताएर बिदाइ हुनुअघिको अन्तिम सम्बोधनलाई निरन्तरता दिए ।
राष्ट्रपतिका रूपमा ८ वर्ष बिताएर बाहिरिने क्रममा गृहनगर सिकागोमा ओबामाले दिएको बिदाइ सम्बोधनले धेरैलाई भावुक बनायो । सम्बोधनमा उनले अधिकांश समय अमेरिकी प्रजातन्त्रको विशेषता वर्णन गर्नमा खर्चिए । कानुनमात्र यथेष्ट हुने छैन्, हृदय पनि चाहिन्छ भने पछि सन्नाटा छाएको थियो ।
हरेक व्यक्तिका सपना पूरा गर्ने असल र महान् प्राप्तिका लागि हामीले पसिना, मिहिनेत र कल्पनाशीलताका माध्यमबाट एकसाथ मिलेर संघर्ष गर्नुपर्छ । हो, हाम्रो प्रगति सधैं एकनासको रहेन । प्रजातन्त्रको कार्य सधैं कठिन, विवादपूर्ण र कहिलेकाहीं रक्तपातपूर्णसमेत हुन्छ । हरेक दुई पाइलाका लागि एक पाइला पछाडि सर्नुपरेको महसुस हुन्छ । तर अमेरिकाको लामो यात्रा जहिल्यै अग्रगतिकै रूपमा परिभाषित छ । विगतमा पनि हामीले जे चाहेका थियौं त्यही र्गयौं ।
अन्ततः हामी विश्वमै धनी, शक्तिशाली र सम्मानित राष्ट्रका रूपमा छौं । र, अझै पनि हाम्रा युवा र तिनीहरूको ऊर्जा, हाम्रो विविधता र खुलापन, हाम्रो जोखिम मोल्ने र परिवर्तन गर्ने असीम क्षमताको अर्थ हो– भविष्य हाम्रै हुनुपर्छ । तर त्यो सामथ्र्य त्यति बेलामात्र महसुस हुनेछ, जतिबेला प्रजातन्त्रले काम गर्नेछ, जतिबेला हाम्रो राजनीतिले जनताको मर्यादा प्रतिविम्बित गर्छ र जतिबेला हामी सबैको संलग्नताले सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउँछ । यही नै अहिलेको हाम्रो आवश्यकता हो ।
प्रजातन्त्रले एकरूपता नै खोज्छ भन्ने छैन । ऐक्यबद्धताको आधारभूत भावना भने आवश्यक हुन्छ । यो कुरालाई हाम्रा अग्रजहरूले बुझेका थिए । प्रजातन्त्रले नै हाम्रा बालबालिको शिक्षा, भावी पुस्ताको असल रोजगारी र राष्ट्र रक्षा गर्ने हाम्रो क्षमता निर्धारण गर्नेछ ।
शब्दान्तरमा भन्नुपर्दा यसले हाम्रो समग्र भविष्य तय गर्नेछ । हरेक व्यक्तिलाई आर्थिक अवसर हुन्छ भन्ने भावना नभएसम्म हाम्रो प्रजातन्त्रले काम गर्दैन । हाम्रो न्यायप्रणालीमा शिक्षा, अवसर, आवास आदि कुनैमा पनि भेदभाव नहुने कानुनको खाँचो छ । हाम्रो संविधान र उच्च आदर्शमा यसको खाँचो छ । तर कानुनमात्र यथेष्ट हुने छैन । त्यसका लागि हृदय नै परिवर्तन हुनुपर्छ । एजेन्सी
बाबु नभएका व्यक्तिलाई पनि बाबु हो भन्ने दाबीले यस्तो सकस
एक हप्ताभित्रै सरकारमा सहभागी हुन्छौं : अध्यक्ष उपेन्द्र यादव
‘मधुमास सकियो ,अब राम्रो गर्नुहोस् सरकार !’
अख्तियारका पूर्व प्रमुख बस्न्यातजी ! शक्तीका आडमा छोरा कहिले सम्म बच्ने ?
गोरेलाई मनोरञ्जन गराउने थपलिया, आफैँले जुटाएको प्रमाण झूटो भन्दै वकालत !
बाइक मार्ट नेपालको कर छली र ठगीधन्दा ! ठगीबिरुद्ध उपभोक्ता हित संस्थाको सक्रियता
प्रधानमन्त्रीबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ शुरु
मन्त्रीहरु नै आम्दानीलाई बैंकमा राख्दैनन् ,सरकारी घोषणा देखाउनका लागि मात्र !
नेकपामा भुसको आगो बन्दै असन्तुष्टी !